कता गए ? महानगरका बरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेल – POKHARA TOURISM NEWS
HomePokharaकता गए ? महानगरका बरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेल
कता गए ? महानगरका बरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेल
June 24, 2018 Rohit Basnet Pokhara 0
पोखरा, १० असार/पोखरा महानगरपालिकाका सामाजिक महाशाखाका वरिष्ठ सुचना अधिकृत ओमराज पौडेल हिजो शनिबार विहानै देखि हराएका छन् ।
शनिबार विहान करिब ५ बजे तिर घरबाट निस्किएका उनी आइतवार सम्म फेला परेका छैनन् । उनी वेपत्ता भएको खबर पाउने वित्तिकै कास्की प्रहरी सहितको रेस्क्यू टोलीले सेती किनार लगायत विभिन्न स्थानहरुमा खोजी गरिरहेको छ ।
उनी घरबाट निस्किएपछि सेतीमा किनारमा एउटा शव फेला पारेको थियो । उक्त शव पुरानो र अर्कैको भएको प्रहरीले जनाएको छ । पौडेलको खोजी अहिले पनि जारी रहेको र परिवारहरु अत्यान्तै चिन्ताजनक भएको परिवारका सदस्यले वताए ।
घरबाट सरसफाइको कार्यक्रम जाने भन्दै निस्किएको पारिवारीक स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनी विहान आठ बजेको एउटा कार्यक्रममा शर्मा प्रमुख अथिति थिए । तर कार्यक्रममा नआए पछि उनको खोजी भएको हो । आज महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै चाँडै घर फर्कन आग्रह गरेको छ ।